US Dept of State - Zimbabwe
"Zimbabwe's wide range of natural resources makes agriculture and mining the main pillars of the economy." more...
"The UK annexed Southern Rhodesia from the [British] South Africa Company in 1923." more...
"The government of Zimbabwe faces a wide variety of difficult economic problems. Its 1998-2002 involvement in the war in the Democratic Republic of the Congo drained hundreds of millions of dollars from the economy." more...
"Zimbabwe is a landlocked country in southern Africa, bordered by the Zambezi and Limpopo rivers. The official language is English, however, the majority of the population speaks Shona. A new unity government was formed in February 2009, along with a formal acceptance of dollarization by the government that ended the country's period of unprecedented hyperinflation." more... Languages of Zimbabwe
"IMF reports and publications for Zimbabwe - The IMF is an organization of 187 countries, working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world." more... Return to list of Countries in Africa